SingForYou.net - Ywar Thar Ywar Par Moe
Ywar Thar Ywar Par Moe
Tags : Ywar Thar Ywar Par Moe by Sithunaung&Susannyunn
By : sithunaung on May 14, 2010
Categories: Rock/Pop Hip Hop
Score: 165 Rating: 5.00 Comments: 64
Ywar Thar Ywar Par Moe's Description
ရွာသာရွာပါမိုး~ ဒီသီချင်းကိုသီချင်းတွေစွယ်စုံရတဲ့ ညီမလေးစူစန်နဲ့ဆိုထားပါတယ်~ ကူညီသီဆိုပေးတဲ့ညီမစူစန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်~ MIX & RECORD ပေးတဲ့ကို BRO 99 ကျေးဇူးအထူးပါ~~ THANK ALL~:)))))))))
MAYTHINGYAN on Jul 14, 2010 0
WELL DONE bro yay. Really love it.Always ********.
KiddY-EML on May 17, 2010 0
အရမ်းမိုက်တယ် .. အဲလို duet သီချင်းကောင်း၂လေးထွက်လာဖို့ကြိုးစားနေဆဲပါ :D 5*********88888
missasean on May 16, 2010 0
very very good my bro yay :)
sithunaung on May 17, 2010 0
thz my little sister~:))
paradise on May 16, 2010 0
OOoooooops......i miss out this song !!!!!!!! :D Very well done both of you !!!!!!!
thz alot sis paradise~~:))
wow wow wow.. 2yaut kone ayann ko kg tal ********************!
thz alot sis brownlay ~~:))
chittatthu on May 15, 2010 0
woooo...so htar kya tar lan htwat nay tar pal byo..nyi ma lay susan yaw bro yaw so htar tar ayan good tal .... really nice...5****************************
sithunaung on May 15, 2010 0
Ilovemusic on May 15, 2010 0
perfect one...so nice2listen..5*4b0th of u ...
bro music yay~အားပေးနားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~:))
turikimuriki on May 15, 2010 0
so nice2listen par both of u... arr pay thwar par tel ..5*4u :-)
sis turikimuriki yay ~အားပေးနားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~:))
Zarmaung on May 15, 2010 0
Excellent duet par...ayannn mite ei..so htar tar 1 kal ko listen loz kg tal byar...arr pay nar sin twar par tal.....shal kg kyi..******************for bro n sis
bro ZMG yay ~အားပေးနားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~:))
9naing on May 15, 2010 0
bro Sithunaung & sis Susan yay..... so htarr kya dar ayann kg dea.... :love it.... great singers! :yes.... dancing thwar kya dar lea mite dea... :yahoo... :) :)
ဘရိုနိုင်းနိုင်းရေတကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့စေတနာထား ကူညီပေးသွားတာ~ရင်ထဲမှာအမှတ်တစ်ရပါပဲ~ကိုနိုင်းနိုင်းကြောင့်သာ ဒီသီချင်းကိုဆိုလို့ရတာပါ~~:)))
yinmin on May 15, 2010 0
sis yinmin yay အားပေးနားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~:))
dimpleminle on May 15, 2010 0
ညီမလေးစူစန်& ကိုစည်သူရေ...အဆိုကတော့ထုံးစံအတိုင်း အရမ်းကောင်း...နားထောင်ရတာရှယ်ပဲ....အားပေးသွားပါတယ် ****************************************
Listen new style rapper suzann and bro STN..nice..***** :D
bro u4gyi yay အားပေးနားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~~:))
susannyunn on May 15, 2010 0
hahhahahhah :)))))))) :P >>>
awesome ...... yay lay mite tel .... ************ to both of you...
thz par mama angel .... xie xie ni ...>>>>>
snowgirl on May 15, 2010 0
;clap; ;clap;ayanayan ko kg dar pal,dkal ko listen loet kg mha kg pal ******* arr pay nar sin thwar par dal shin :D ywar thar ywar par moe :P
very nice.... ********
Uncle Maung ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~~:))
ဟာ... ဟယ်,,, အိုးးးးးးးး !!!!! ရွာသာရွာပါမိုးးးးးးး ဟေးး ဒီး~~ ဒါ~~ ဒီး ~ ဒီး~~ ဒါ ~~ ဒီး ရေလည်မိုက်ရယ်ကွာ :mm :mm :yahoo :yahoo စိတ်ပူနေတာပယ်လိုထွက်လာမလဲလို့လေ :?:? စူစန်ကဒါမျိုးပုံစံရှိုတာ ပထမဆုံးမိုလို့ပါ :yes ဟုတ်ကဲ့.....အကောင်းဆုံးဖစ်အောင် ရောသမမွှေပြီး record ပေးသွားတဲ့ဘရိုဂျီးF9 ဂျီး ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်လေနော့ :yes >>>> သီချင်းလေးကို အတူသီဆိုသွားတဲ့ ဘရိုဂျီးC2 ဂျီး နဲ့ အားပေးနားဆင်ပေးဂျတဲ့မောင်နှမများအားလုံးကို စူစန်က ကျေးဂျူးကမ္ဘာဆိုင်ပါလို့နော:)))))))))))):thanx >>>>>
ဒီး~~ ဒါ~~ ဒီး ~ ဒီး~~ ဒါ ~~ ဒီး ~~~ဒါပေါ့ဘရိုနိုင်းနိုင်းကိုကျေးဇူးအထူး~ဘရိုကြီးဆိုချင်တာကိုကြိုးစားပြီးသီဆိုပေးတဲ့ ညီမလေးစူစန်ကိုကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်~~း))
Very very Nice duet...great atttachment singss par palzz....Bro g sithu&jit susan lay yay...luv it xo xo much ...All million starss for2of u par shintt:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*>>>>>>>>>>>>>>
ဒါဆိုကြိုးစားရကျိုးနပ်ပြီချင့် ဟီး :)))))))))))
jpkglay on May 14, 2010 0
wow... wow... wow..... hey guys!... you make me log in at once to comment on your creation.... yr creation is really nice... no no... it's must be titled as best ..... :D:D:D.... luv it too much... too much .... too much..... wow.... great....:))))))))))))))))..... this song and yr couple became my favorite one in SFY.....
HEY...... OPPZZZZ.. realli like that ...??? yeah.... i DO luv it too coz this is my veri new singing for that veri new song i hv never listened B4 :P....ahaaaaaaaaaaaaaa:)))))))))) arigatooooooooo my bro g F5 G............:D :P >>>>>
ဪ~အဲဒါကြောင့်ဘရိုကခဏလေးမြင်ပြီးပျောက်သွားတာကို~ တကယ်ကိုမှတ်မှတ်ရရအားပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~ တစ်ကယ်တော်တာကဘရိုနိုင်းနိုင်းပါ~~:))
Taw_Thar_Lay on May 14, 2010 0
ဒီလိုသီချင်းမျိုးတွေ ခံစားတတ်အောင် ကြိုးစားနေဆဲပါ။ *****း-)
ဦးဦးတောတား ဂျဂါးတတ်ပြီဝေးးးးး ဘရာဗိုဗိုဗို အဟား:)))))))))))))))))))))))))
~ဒါဆိုများများနားထောင်ပါခင်ဗျာ~းP~bro g KTTL ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~း))))
soramoe on May 14, 2010 0
wow wow wow - my favorite duo -ayann khite thwar pyi - de tha chin lay ko so htar kya tar paing tal - 2youte sa lone - with quality mixed down - soramoe si ka susan, sithu & 99atwet so many stars moe tway ywar thoon lite par tal
THZ for ur great comment on our group job !!!! :thanx sis .>>>>>>>>
sis g soramoe yay~~သုံးယောက်စလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~:)))))))))
Rosies on May 14, 2010 0
arr par pay del shint good par del ma yay 5***************************
sis rosies ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~း)))
doneti on May 14, 2010 0
လူမိုက်တေဂျည်းပဲလေ တိတယ်ဟုတ် ????အဟား:)))))))))))
aprilsea4 on May 14, 2010 0
great n perfect lone tal sis n bro dot yayy..ar yann like n luv it....million stars for both of u..************************** all cheers
millon thz par chint sis april yay .>>>>>
.million stars တွေပေးသွားတဲ့sis aprilsea4 ကို~ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~း))
susu23 on May 14, 2010 0
kg tel byo bro n sis arr pay thwar par teh********4u2
kyay zuuakyi g tin chi par kyaung ..>>>>>:mm
sis susu ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ~း)))
icegirl on May 14, 2010 0
wow...........great.............bro nae sis2yout lone so htar tarayann kg par ei...........***********
ကျေးဇူးအကြီးဂျီးပါ ICE GAL LAYY ရေ >>>
sis icegirl ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်~း)))
hippo on May 14, 2010 0
wow really great sis & bro ... ***************
kthetkawmu on May 14, 2010 0
sis & bro yay.....ayann kg tar pae narr tg lo.............arr pay narr sin thwar par tal****************
thank you so much for 1 st comment & vote ~~:))
Feedback : 64
Feedback : 10